Nchịkọta m: Nchịkọta Google maka iPhone | Martech Zone
KISSmetrics weputara ngwa ohuru nke aputara na iPhone Nchịkọta m. Ọ bụ ụzọ kachasị ọsọ iji hụ etu usoro Google Analytics gị na-eme mgbe ị na-apụ na tebụl gị.
N'afọ a, ndị folks na KISSmetrics na-achọ ezigbo ngwa Google Analytics iji nyere ha aka idobe taabụ na data nke ha. Ha ahụghịkwa ya. Ma ngwa ngwa mkpanaka bụ WAY dị oke mkpa ma agaghị ekwe ka ịme atụnyere ọ bụla, ma ọ bụ ha gbalịrị ime WAY nke ukwuu ma ọ dịghị mfe iji.
Nchịkọta m na-egosi data Google Analytics gị mgbe ị na-agagharị, na nzukọ, ma ọ bụ chọọ mmelite ngwa ngwa.
na Nchịkọta m, ị nwere ike iji data taa tụnyere ụnyaahụ, otu ụbọchị izu gara aga, na otu ụbọchị izu abụọ gara aga. I nwekwara ike iji data nke ụnyaahụ tụnyere izu ndị gara aga ma ọ bụ data nke izu a na izu ndị gara aga.
Nchịkọta m na-enye gị data ị chọrọ ozugbo. You'll ga-enweta Ọbịbịa gị ọsọ ọsọ, ndị ọbịa pụrụ iche, nlele ihu akwụkwọ, ebumnuche, azụmahịa Ecommerce na Ecommerce Revenue.
Tags: Ego mbata EcommerceAzụmahịa Ecommerceihe mgbaru ọsọGoogle Analyticsgoogle mobile mobile ngwaiosiphonenlele ihu akwụkwọNdị ọbịa pụrụ ichenleta
Ihe ịrịba ama 6 Ọ bụ Oge ịkụnye Software Software Gị
Okwu maka Mobile Optimization
Ụlọ ọrụ Software Malaysia
Sep 20, 2013 na 3: 08 AM
Chaị, echere m na nke a bụ ezigbo ngwa maka ndị chọrọ mmelite ngwa ngwa.